Home Nolosha Guurka ay waalidka qorsheeyaan malaga ilbaxay? Qiso ku dhacday gabar
Markii hore waalidiinteeda wax dhib ah kama aysan muujinin markii ay bartay saaxiibkeed laakiin muhiimad weyn a aysan siinin arrinta ka dhaxeysay gabadhooda iyo wiilka ay la socotay.
Nina ah gabar muslim ah oo u dhalatay indonesia waxay ahayd 18 jir markii ay aadday jaamacadda iyadoo baraneysay cilmiga ay jecleyd ee Qurxinta Guryaha gudahooda.
Qorshaha uguma jirin in ay guursato ilaa inta ay ka qalinjabineyso, laakiin qof ayey la kulantay markii ay sanadkii labaad ee jaamacadda ku jirtay.
Waxay go’aan ku gaareen in ay isguursanayaan marka ay qalin jabiyaan, iyaduna waxay warkeeda si tartiib tartiib ah ugu sheegtay waalidiinteeda.
Kaddib waxay usoo bandhigtay mowduuca guurka xilligii ay qalin jabinta soo dhawaatay. Waxay ku dhaheen, “Maya”, sababtoo ah tan koowaad wiilku wuxuu kasoo jeeday dhaqan kale oo ka duwan kooda, inkastoo uu muslim ahaa.
Waxay isku dayday in ay ka dhaadhiciso arrintan, iyadoo u sheegeysa in xiriirkan ay labadooduba ku bixiyeen waqti badan iyo dadaal.
Hase yeeshee, waalidka gabadha waxay ku adkeysteen go’aankooda diidmada ah. Arrimaha kale ee ay u sababeynayeen waxaa ka mid ahayd in uusan u qalmin iyada, maadaama uusan lahayn hanti saddex biloodna uu ka yaraa da’deeda.
Liislka sababaha ay ku hor istaageen guurka gabadhooda aad buu u dheeraa, waxayna ka dalbadeen in ay raadsato qof u qalma oo deegaankoodana kasoo jeeda.
Sanado ayaa kasoo wareegay…
Nina iyo gacaliyaheeda ma uusan joogsanin xiriirkooda, inkastoo waalidkeed ay ku gacan seyreen in ay qoyska wiilka kala hadlaan arrimaha guurka.
Cadaadis ayaa kusii kordhayay gabadha waxayna arkeysay saaxiibbadeed oo dhammaan la wada guursanayo, halka ay da’deedana kusii dhawaaneysay sodonka sano.
Qaraabada ayaa billowday in ay ka hadlaan xaalkeeda, kaddib waxaa la guursaday walaasheed ka yar, oo la timid nin dookheeda ah balse kasoo baxay shuruudihii qoyska.
Durbadiiba Nina waxay billowday in ay walwasho, iyadoo aan hubin waxa uu mustaqbalkeeda noqonayo. Adeerkeed oo dadka wanaagga jecel ah ayaa soo dhex galay arrinta, wuxuuna aabeheed weydiiyay sababta uu u hor taagan yahay guurka gabadhiisa. Sababta uu ugu oggolaan waayay in ay la aqal gasho wiilka ay waqtiga dheer isla socdeen mar walba telefoonka iskula hadlaan.
Ugu dambeyn aabeheed wuu tanaasulay, wuxuuna yidhi: “Waxaan sugeynaa in gabadha nalaga soo doonto, qoyskana loo imaado sidii caadada ahayd, laakiin wali nooma muuqdaan wax noocaas ah.”
Qisada Nina waxy dad badan ku tilmaameen in guurka ay waalidka soo qorsheeyaan uu noqday mid xlligiisii laga soo gudbay, inkastoo dib u dhaca badan ay sabab u ahayd in waalidiinteeda ay doonayeen inay heer sare ka gaarto waxbarashadeeda ayna ku dhagganaayeen dhaqankooda marka ay timaado guurkeeda.
Sidaas ayey waddada ugu furantay guurka gabadhii iyo wiilkii ay jecleyd.
Waa maxay Guurka ay waalidka qorsheeyaan?
Dhaqamadu way kala duwan yihiin, laakiin guurka waalidka qorsheeyaan waxaa inta badan loo yaqaannaa kan wiilka iyo gabadha la isu doono, mararka qaarna fursad loo siiyo in ay si gaar ahna u wada sheekeystaan.
Meelo badan ayuu guurka noocan ah wali ka jiraa, walow badanaa dhalinyaradu ay iyaga isasoo xushaan kaddibna sidaas loo maro xeerka oo ugu dambeyn kusoo biyo shubta doonayo.
Next article20 xaqiiqooyin cajiib ah oo ku saabsan qalbiga (wadnaha)